I-Redmi Buds 3 Pro, sihlalutya ii-headphone obukade uzifuna | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Redmi Buds 3 Pro, uhlalutyo, ixabiso kunye nezimvo
URafa Rodríguez Ballesteros | 19/07/2021 18:00 | Reviews
Kwakhona sikulethela uphononongo lwentloko olungenazingcingo. Kodwa ngeli xesha asijonganga nayo nayiphi na into, namhlanje sihlalutya imodeli ekulindeleke kakhulu ngabalandeli beMi. Sikwazile ukuvavanya ezintsha iintsuku ezimbalwa I-Redmi Buds 3 Pro kwaye sikuxelela konke ngazo.
Kulabo sele beyazi kakuhle iXiaomi, igajethi entsha evela kwinkampani inayo Ukulindela okuphezulu kumgangatho nakwixabiso. Kwaye kwabo bangekabi nethuba lokuba nesixhobo sokutyikitya, iBuds 3 Pro lithuba elihle kakhulu kuyo.
1 I-Buds 3 Pro, ayisiyiyo enye imodeli
2 I-Unboxing Redmi Buds 3 Pro
3 Uyilo lwe-Buds 3 Pro
4 Yonke itekhnoloji obuyilindele
5 Iimpawu zobugcisa
I-Buds 3 Pro, ayisiyiyo enye imodeli
Njengoko uyazi, kwi-Androidsis zininzi ii-headphone esinokuba nethamsanqa lokuzama. Wonke umntu unento elungileyo, kwaye sihlala sifumana izizathu zokuba befanelekile. Eyona yoqobo, eyona inengqiqo, eyemibala kakhulu okanye yexabiso eliphantsi. Ne I-Redmi Buds 3 Pro, wakhe Izizathu ezininzi oza kuzifumana zibe kukufumana kwakho okulandelayo.
Yiba ngowokuqala ukufumana i- Iibhokhwe 3 Pro ngezaphulelo
Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi, ukubona imodeli enye yee-headphone, kubonwa konke. Kwaye kunzima ukufezekisa inqaku lokwahlulahlula kwabanye ukuya ngaphaya kombala okanye imilo. I-Redmi Buds 3 Pro ikwazile ukubonakala kwabanye kuyilo enkosi ekusebenziseni izinto ngendlela engaqhelekanga.
Ngapha koko, into yokuqala ebonakalayo ngaphandle kuyilo lwayo yile icandelo lokuchukumisa elishiyiweyo yendlebe. Yenziwe kwifayile ye- Iplastikhi ebengezelayo, eguqukayo efana neglasi kwaye inikezela isixhobo a imbonakalo yepremiyamu kakhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, bema ngaphandle kwezinye iindlela zokuba umfanekiso owahlukileyo kubo bonke abo siye sakwazi ukuzama.
I-Unboxing Redmi Buds 3 Pro
Lixesha lokuba ujonge ngaphakathi kwebhokisi yezi ntloko zilindelwe ixesha elide. Asinakho ukuyeka ithuba lokuthetha nge Ukupakishwa kweMi, njengesiqhelo Phawula umahluko ngobuchule kunye nomgangatho kunye nokusebenza. Kuncinci ukukuxelela, ngotshintsho esilufumanayo yonke into esinokuyithemba. Kwaye ukuba awufuni kulinda ixesha elide, odola iiBuds 3 Pro zakho ngoku Ngexabiso elifanelekileyo kwiAliexpress.
La ityala lokutshaja, kuthi kwimeko yethu ngumbala ongwevu okhanyayo ngokwenyani. Ngaphakathi kuyo ii-headphone ngokwazo. Ukongeza, sine amaxwebhu asisiseko okusetyenziswa kunye newaranti yemveliso. Okokugqibela, i Intambo yokutshaja, ngeli xesha linefomathi Uhlobo C lwe-USB, kunye nesithathu iiseti ezongezelelweyo zeepads ngobukhulu obahlukeneyo.
Uyilo lwe-Buds 3 Pro
I-priori, ngaphambi kokubanakho ukuvavanya, uyilo lwe-Buds 3 Pro luyakwazi ukutsala umdla. Kwaye bayayenza ngenxa yenkangeleko yokuqala ababonisa ngayo nge Ukusetyenziswa kwe "glasi" eguqukayo kunye nebengezelayo yendawo yokuchukumisa yeefowuni. Ngaphandle kwamathandabuzo yimpumelelo enkulu loo nto ibenza babe nomtsalane kwaye bagqibe kubenza babe ngabakhokeli beemarike.
I-Buds 3 Pro entsha ine ifomathi yendlebe "Endlebeni", kwaye basebenzise iipads ezidumileyo ezivuselela ezo mbono zahlukeneyo. Banobukhulu obuncinci ngokwenene, kwaye bakuba bebekiwe batyhila kuphela indawo apho ulawulo lolawulo lukhona. Amava omsebenzisi aya kuphucula kakhulu ukuba siwasebenzisa nee "gummies" yanele olunge ngakumbi kwi-anatomy yethu, into nayo iya kuqinisekisa ukubanjwa okukhuselekileyo.
Sinefayile ye- I-35 mAh yokutshaja amandla kwindlebe nganye esivumela ukuba sonwabele ukuzimela kwe ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-6 zokudlala Qhubeka uhamba. Oku kuhlala kuxhomekeke kwinqanaba levolumu esiyisebenzisayo nokuba ingaba asinakho na ukurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo. Yonke into oyikhangelayo kwii-headphone, thenga iBuds 3 Pro yakho ngezaphulelo.
Ukuba ujonga ityala lokutshaja, igqityiwe ngeplastiki ecoliweyo ngokucofa "okuhle" kakhulu. Ubungakanani bukulungele ukuhlala uziphethe epokothweni naphi na. Inesiciko semagnethi ukuze sihlale sivale ngokugqibeleleyo kwaye umthwalo uyasebenza. Ngaphambili sifumana ifayile ye- iqhosha lokuvumelanisa nge-smartphone yethu ekuya kufuneka siyisebenzise kube kanye.
Kufuneka sitsho ukuba sinikwe imeko emide yecala lokutshaja, kwaye ii-headphone zifakiwe ukusuka phezulu kunye nelo cala ngokuthe nkqo. Oku kuthetha ukuba amaxesha ambalwa okuqala asicacanga ukuba ngalinye liyaphi. Nangona le yinto esiza kuyilawula kungekudala.
Emazantsi sifumana ukulayisha izibuko, njengoko bekulindelwe, ifika kunye Ifomathi yohlobo C lwe-USB. Inefayile ye- 470 mAh umthamo wokutshaja kwaye sinokuba ne-100% yentlawulo yakho ngeyure nje ezinesiqingatha.
Yonke itekhnoloji obuyilindele
Bekulindeleke ukuba ii-headphone zeRedmi Buds 3 Pro zibe nayo Itekhnoloji yakutshanje, kwaye ke kunjalo, awuyi kuphoswa nayiphina into. Sifumene itekhnoloji Bluetooth 5.2 ebonelela nge Unxibelelwano oluzinzileyo ukuya kuthi ga kwi-10 yeemitha kude. Kwaye ukongeza, iyakusivumela qhagamshela ii-headphone kwizixhobo ezibini ngaxeshanye. Ukuba uqinisekile Fumana iBuds 3 Pro isaphulelo kwi Aliexpress.
Ikwaqaqambisa itekhnoloji ye Ukucinywa kwengxolo smart. Sifumana iindlela ezintathu ezahlukeneyo apho ukhetha khona. Kodwa ii-headphone ngokwazo zinjalo Iyakwazi ukubona inqanaba lengxolo ukusebenzisa indlela efanelekileyo. Bafumana ukunciphisa ukuya kuthi ga kwi-35 dB yesandi sokujikeleza. Ndiyabulela imakrofoni kathathu kunye Ialgorithm ekhethekileyo eyahlukileyo icoca ingxolo yangasemva.
Enye yamandla kwaye kubalulekile ukuba uninzi lwe "gamers" yile I-Buds 3 Pro inendlela "yokudlala". Ukuyisebenzisa siyifumana ukunciphisa i-latency ukuya kuma-millisecond angama-69. Awuyi kuphoswa yinkcukacha enye yemidlalo oyithandayo kunye ne-smartphone yakho, i-pc, okanye ithebhulethi. Y Bayavana ngokumangalisayo ne-MIUI Enkosi kumanyano olukhawulezayo kunye nePop-up.
Okokugqibela, into esingenakukuphepha ukujonga kukuzimela. Nge-Buds 3 Pro sinokumamela umculo ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-28 ngaphandle kwesidingo sonxibelelwano lokutshaja. Intlawulo nganye yebhetri epheleleyo iyasinika ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-6 ungaphazanyiswa ukudlala umculo okanye uthotho lwakho oluthandayo.
Umzekelo Iibhokhwe 3 Pro
Umgama Ukuya kutsho kwiimitha ezingama-10
I-ANC ekrelekrele Zintathu iindlela ezikhoyo
Ukuzimela Iiyure ze28
Ibhetri yentloko 35 mah
Ityala lebhetri 470 mah
Ixesha lokutshaja ngehedfoni 1 iyure
Ixesha lokutshaja Iiyure ze2.5
Ukuhlawulisa ngokukhawuleza Iiyure ezi-3 zokusebenzisa nemizuzu eli-10
Ifomathi yokulayisha Uhlobo C lwe-USB
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo Ewe-Qi
Ubunzima befowuni 4.9 g
Ubunzima betyala 55 g
Ikhonkco lokuthenga Iibhokhwe 3 Pro
Uyilo yoqobo kunye nepremiyamu
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo Qi ehambelanayo
Uyilo kunye nembonakalo
Intuitive intle indlela yokuyibeka kwimeko
Ifomathi yendlebe kunye ne "gummies"
I-Redmi Buds 3 Pro
Ithunyelwe nge: 19 de julio de 2021
Utshintsho lokugqibela: 19 de julio de 2021
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » I-Redmi Buds 3 Pro, uhlalutyo, ixabiso kunye nezimvo
Amagama aphambili eqela kuWhatsApp
Iimidlalo ezi-6 ezilungileyo kakhulu ze-Android